ओमिक्रोन « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
घटेन मृत्युदर, चिकित्सक भन्छन्- ‘१० प्रतिशतकाे मात्रै काेराेनाबाट ज्यान गएकाे छ’
अस्पतालहरूका अनुसार मृत्यु हुने ७० प्रतिशत व्यक्ति खोप नलगाएका र दिर्घरोगीहरू रहेको पाइएको छ । वीर अस्पतालका छातीरोग विशेषज्ञ डा. प्रज्वल श्रेष्ठ पनि मुत्यु भएका अधिकांश व्यक्ति खोप नलगाएको रहेको
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) ले कोभिड–१९ को ओमिक्रोन नै अन्तिम भेरियन्ट नभएको भन्दै सचेत रहन विश्वजगतलाई आग्रह गरेको छ । डब्लूएचओको कोभिड–१९ प्राविधिक विभागका प्रमुख मारिका वेन्ले केरकोभले
नेपालमा सतप्रतिशतमा ओमिक्रोनको संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं, माघ २६ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना परीक्षण गरिएका मध्ये सत प्रतिशतमा नै हाल ओमिक्रोन भेरियन्ट देखिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले बुधबार गरेको प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा.
ओमिक्रोनको संक्रमणदर घट्दै : स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौं, माघ २१ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमणदर घट्दै गएको बताएको छ । मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगिता कौशल मिश्रले नेपालमा कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरियन्ट
नेपालमा ओमिक्रोनको सह–प्रजाति सक्रिय : विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूएचओका कोभिड प्रतिकार्य टोलीका सदस्य डा. बोरिस पाभलिनले ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट सक्रिय बन्न थालेको जानकारी गराउनुभएको हो ।
काठमाडौं, माघ १२ । नेपालस्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को कार्यालयले ओमिक्रोन भाइरसले कोभिड महामारी अन्त्य गराउँछ भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नभएको बताएको छ। केहि दिन अघि नेपाली मिडियामा आएको एक
काठमाडौं, माघ १० । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ भाइरसको ओमिक्रोन भेरियन्टसँगै नयाँ भेरियन्ट देखिने जोखिम बढेकाले निरन्तर सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग
काठमाडौं, माघ १० । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आम नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा थप संवेदनशील बन्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको सन्दर्भमा
काठमाडौं, माघ ८ । नेपालमा दैनिक रेकर्ड तोड्दै गएको ओमिक्रोन संक्रमण आगामी केही साता झन उच्च रुपमा बढ्ने देखिएको छ । अस्पताल भर्ना हुने संक्रमितको संख्या नबढे पनि ओमिक्रोन संक्रामक